Dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Lambar 50 ee Shabeellaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dagaal u dhaxeeya labo beelood ayaa saaka markale ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Lambar 50.
Waxaa dagaalkaas ku dhintay ilaa 6 qof oo ah labadii dhinac ee dagaallamay, sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Mr. Siidii ayaa tilmaamay iney ka xun yihiin dagaalka kasoo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna xusay in dedaal badan lagu bixiyey sidii dagaalkaa loo baajin lahaa balse haddana uu saaka markale qarxay.
Wuxuu sheegay Siidii in dowladda Soomaaliya ku guda jirtay sidii colaadaas loo dhameyn lahaa, oo ay magaalada Muqdisho joogaan odayaal dhaqameed ka kala socda labada beelood.
Dagaallada kusoo laalaabta Shabeellaha Hoose ayuu gudoomiye Siidii sabab uga dhigay in labada beelood ay gobolkaas u kala jiidanayaan Mudisho iyo Baydhabo, wuxuuna xusay in colaada gobolkaasi ku dhamaan karto haddii xaaladda Shabeellaha Hoose dhinac u dhaco.
Labadan beelood ee dhowr jeer ku dagaallamay Shabeellaha Hoose oo kala ahl Biimaal iyo Habargidir ayaa waxaa dhowr horay dowladda Soomaaliya u kala dhex dhigtay heshiis nabadeed, inkastoo aan weli xal kama dambeys ah colkaas laga gaarin.